हिरोइन निशा घिमिरेलाई कसरी भयो यस्तो ? भारत गएकी निशा यस्तो भएर नेपाल फर्किएपछि Nisha Ghimire, भिडियो हेर्नुहोस (सके सहयोग नसके सेयर गराै) – Onlines Time
हिरोइन निशा घिमिरेलाई कसरी भयो यस्तो ? भारत गएकी निशा यस्तो भएर नेपाल फर्किएपछि Nisha Ghimire, भिडियो हेर्नुहोस (सके सहयोग नसके सेयर गराै)
June 11, 2021 onlinestimeLeaveaComment on हिरोइन निशा घिमिरेलाई कसरी भयो यस्तो ? भारत गएकी निशा यस्तो भएर नेपाल फर्किएपछि Nisha Ghimire, भिडियो हेर्नुहोस (सके सहयोग नसके सेयर गराै)
नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन म’रणको दोसाधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ ।
जस्मा उनी मन्द मुस्कुराईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।भोजपुरी फिल्म मधेसी पुत्र २ का साथमा डियर जिन्दगीलगायतका केही टेलिसिरियलकी अभिनेत्री तथा काठे लोक दोहोरी गीत सानु माया हाँसेर बोल, ट्याक्सी मोटर कार, आज निस्ठुरीको फोटोजस्ता करिब दुई दर्जन म्युजिक भिडियोकी मोडल निशाको सानैदेखि कलाकारितामार्फत नाम कमाउने सोच थियो।
ज्ञानेन्द्र शाही लगायतको टिममाथि यसरी भयाे सुर्खेतमा आ*क्र*मण,यस्तो छ अहिले Gyanendra Shahi काे अवस्था, (भिडियो हेर्नुहोस)
रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका एक नेपालिको दु’ र्घटनामा परि मृ त्यु